Page2– Easy Travel Dawei
Welcome to Tizit, Fishers’ community
Learn how local fishers use fascinating fishing gear, from low to high tide! Try your hand castingafishing net or searching for shellfish withalocal…… Read more “Welcome to Tizit, Fishers’ community”
December 6, 2019 January 6, 2020 by SAM THE MAN
ကွေး အိုးခတျေကပငျ မွအေိုးလုပျငနျးလညျး ပျေါခဲ့မညျဖွဈသညျ ။ မွအေိုးတှငျ ပနျးပုံစံအမြိုးမြိုးဖျော ပွီး အသုံးပွုခဲ့သညျမှာ ပြူခတျေကပငျ စတငျခဲ့သညျ။ ခတျေအလိုကျ မွအေိုးလုပျငနျးကို တိုးခြဲ့လုပျကိုငျခဲ့ရာ ဒသေအလိုကျ ထငျရှားသော အိုးအမညျမြားပျေါထှနျးခဲ့သညျ ။ ပဲခူးဒသေတှငျ ပုဇှနျမွောငျးအိုး၊ တာဝဘူး မိတ်တီလာဒသေတှငျ သဲတောကိုး စသဖွငျ့ ထူးခွားသောအိုးမြား ပျေါထှကျခဲ့သညျ ။…… Read more “ထားဝယျအိုးလုပျငနျး”
September 19, 2019 by SAM THE MAN
တစ်ချိန်က ထားဝယ်မြို့နေ စပါးသူဌေးမကြီး ဒေါ်ပျင်သူ ပိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်သည်။ ဝဗျောရွာဘက်မှာ လယ်ဧကများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး အရင်က အိမ်၏အနောက်ဘက်ရှိ စပါးကျီကြီးကြောင့်လည်း လူသိများခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။ 1825 နောက်ပိုင်း ပီနန်ဘက်ကနေ ဝင်လာခဲ့သည့် တရုတ် လက်သမားဆရာတို့၏ လက်ရာများထဲက တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရပါသည်။ တံစက်မြိတ်များကိုပင် သစ်သားဖောက်ပန်းအလှဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည်။ ဝရံတာကို စကော့တလန်နိုင်ငံ ကာဝီကျေးရွာက ထုတ်လုပ်သည့် သံပန်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ ကိုလိုနီခေတ် လက်ရာဟန် တရုတ်၊ပေါ်တူဂီ ဗိသုကာ လက်ရာဟန်မျိုး ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ ထားဝယ်မြို့၏မြောက်ဘက်မြို့ရိုးကို ဖြိုဖျက်တည်ဆောက်ထားသော ကိုလိုနီခေတ် ဗာနေလမ်းမကြီးပေါ် ယနေ့ အခေါ် နိဗ္ဗာန်လမ်းမပေါ်တည်ရှိသည်။ နှစ် ၁၀၀ ခန့်သက်တမ်းရှိပြီဟုသိရပါသည်။ #HeritageVintageHouseDawei #MyanmarBeEnchanted #WelcomeToDawei samthemandawei.com
August 1, 2019 by SAM THE MAN
Wow! I got another more year. 2019 Certificate of Excellence on TripAdvisor. #2018 #2019 Thank you all of my beloved clients who wrote reviews on TripAdvisor about their experience with me on day trip. This achievement make me more confidence to continue of tailored day trip concept of authentic local experience, responsible and sustainable tourism in Dawei.
May 23, 2019 May 23, 2019 by SAM THE MAN
SHWE TAUNG SAR PAGODA
Shwe Taung Sar Pagoda isahistoric edifice situated in Tavoy, Tanintharyi Region. According to the legend The koel sings and Dawei comes into existence”, Dawei. Administrator…… Read more “SHWE TAUNG SAR PAGODA”
February 12, 2019 February 12, 2019 by SAM THE MAN
Palm wine (Toddy) farming in Dawei region
Palm wine(Toddy) production in Dawei region by small holders and individual farmers may promote conservation as palm trees becomeasource of regular household income that may…… Read more “Palm wine (Toddy) farming in Dawei region”
February 3, 2019 by SAM THE MAN
Have you ever wondered why cashew nuts are so expensive?
Have you ever wondered why cashew nuts are so expensive? Isalot of work before they are in the box and it is ready to eat.…… Read more “Have you ever wondered why cashew nuts are so expensive?”
January 28, 2019 January 28, 2019 by SAM THE MAN
Wonderful Experience with Sam
We visited Dawei with Sam as our guide justafew days ago. He was super professional, considerate, attentive and caring to our group of 12 high…… Read more “Wonderful Experience with Sam”
January 26, 2019 by SAM THE MAN
Amazing Way To Experience Local Culture
I had an absolutely amazing time with Sam doingafull day tour in dawei. The day before the tour, Sam came to meet me to discuss…… Read more “Amazing Way To Experience Local Culture”
January 21, 2019 by SAM THE MAN